तुलसीपुरमा निर्माणाधिन सभाहलमा कस्ले कति सहयोग गर्दै छन् ? « Farakkon
तुलसीपुरमा निर्माणाधिन सभाहलमा कस्ले कति सहयोग गर्दै छन् ?
दाङ, वैशाख ८ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ को दोघरेमा निर्माणाधिन सभाहल निर्माणको लागि विभिन्न व्यक्ति र उद्योगले सहयोग गरेका छन् । सभाहल निर्माण समितिका संयोजक तथा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका सल्लाहाकार विमल रिजालले दोघरेमा निर्माणाधिन बहुउदेश्य सभाहलका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले सहयोग गरेको जानकारी दिएका छन् ।
५ लाख भन्दा बढी सहयोग गर्नेहरु
सभाहल निर्माण समितिका संयोजक समेत रहेका रिजालले दाङका दुई र रोल्पाको एउटा सिमेन्ट उद्योग वाट गरि १६ लाख बढीको सिमेन्ट सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिए । घोराही स्थित सगरमाथा सिमेन्ट उद्योगवाट ११ लाख बराबरको सिमेन्ट, तुलसीपुरस्थित सोना सिमेन्ट वाट ५ लाख बढीको सिमेन्ट र रोल्पा जिल्लाको रोल्पा सिमेन्ट उद्योग वाट १ लाख ५१ हजार रुपैंयाको सिमेन्ट सहयोग स्वरुप प्राप्त भएको सभाहल निर्माण समितिका संयोजक रिजालले बताए । त्यस्तै तुलसीपुर क्षेत्रका तीन वटा इट्टा उद्योगले इट्टा सहयोग गरेका छन् । सभाहल निर्माणका लागि जुद्धबहादुर केसीको जेके इट्टा उद्योगले एक्लै ३ लाख इट्टा, सेवा इट्टा उद्योग र पशुपति इट्टा उद्योगले समान ५÷५ हजार इट्टा सहयोग गरेका छन् ।
नगद तर्फ सबैभन्दा बढी रकम तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित व्यवसायी डिल्लीबहादुर बस्नेले एक्लै १५ लाख, ४ कठ्ठा जग्गा दाता यज्ञबहादुर केसीले नगद ११ लाख ११ हजार १ सय ११, विनिल केसी र देवराज केसीको परिवारले ७ लाख ५ हजार, यमकुमारी केसीले ६ लाख ६६ हजार ६ सय ६६, श्याम केसीले ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५, सभाहल निर्माण समितिका संयोजक विमल रिजालले आमा नन्दादेवी रिजालको नामवाट ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैंया सभाहल निर्माणको लािग नगद प्रदान गरिसकेका छन् ।
स्वर्गिय व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठले घोषणा गरेको ५ लाख ५ हजार ९ रुपैंया भने प्राप्त हुन बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ । त्यसैगरी तुलसीपुर निवासी बामदेव शर्मा एक्लैले १८ लाख बराबर सहयोग गर्ने भएका छन् । ११ लाख बराबरको मन्दिर निर्माण गरिदिने तथा बाँकी ७ लाख नगद दिएका छन् । सभाहल निर्माणमा सघाउन तुलसीपुर नगरविकास समितिले ५ लाख १५ हजार नगद र थप १५ लाख मुल्य पर्ने जग्गा उपलब्ध गराएको निर्माण समितिका संयोजक रिजालले बताए । त्यसैगरी तुलसीपुरकै म्यानपावर व्यवसायी जागेश्वर वलीले १३ लाख १३ हजार बरावरको एउटा घडेरी प्रदान गरेका छन् ।
यो बाहेक ५ लाख भन्दा कम सहयोग गर्ने दर्जनौं सर्वसाधारण र व्यापारीको सहयोगमा तुलसीपुर ८ दोघरेमा ३ करोड बढी लागतको सभाहल निर्माण गर्न लागिएको छ । जस्को डिजाईन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर पवनकुमार योगीले तयार पारको हुन । यसअघि विभिन्न समयमा तुलसीपुर वाणिज्य संघले यहाँको अरनिको मैदानमा लगाएको मेला महोत्सव वाट संकलित मध्य पौने करोड रकम वैंकमा मौजात रहेको निर्माण समितिका संयोजक विमल रिजालले जानकारी दिए ।
२०७७ सालसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य
आगामी नयाँ वर्षसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । ३ करोड बढी लागतमा निर्माण गर्न लागिएको सभाहल निर्माणको काम डेढ महिना अघिदेखि सुरु भएको हो । हालसम्म २५ प्रतिसत निर्माण कार्य पुरा भएको सभाहल निर्माणको जिम्मा पाएको अमृत निर्माण सेवा तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ । तुलसीपुर क्षेत्रमा ठूला सभा समरोह तथा कार्यक्रमको लागि आवश्यक सभाहल नभएको हुँदा त्यो आवश्यकता परिपुर्ती गर्न निजी क्षेत्रले सहयोग मागेर सभाहल निर्माण सुरु गरेको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका सल्लाहाकार विमल रिजालले जानकारी दिए । सभाहल निर्माण गर्न रिजाल अध्यक्ष भएको समयमा उद्योग वाणिज्य संघले ४० लाखमा १ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो ।
बाँकी ४ कठ्ठा जग्गा भने तुलसीपुरका एकजना व्यवसायी यज्ञबहादुर केसीले निशुल्क रुपमा वाणिज्य संघलाई प्रदान गरेका थिए । बहुउदेश्य सभाहल भनिएपनि हाललाई स्पोर्ट बाहेक अरु सबै कार्यहरु जस्तै सभा सम्मेलन, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न सक्ने गरि सभाहल निर्माण भइरहेको व्यवसायी रिजालले बताए । ‘ त्यहाँ हामी मन्दिर पनि निर्माण गर्ने छौं, विवाह मण्डपपनि त्यही हुन्छ र पार्टी प्यालेसपनि त्यहाँ निर्माण गरिने छ,’ वाणिज्य सल्लाहकार रिजालले भने । हाल त्यहाँ ८ सय बढी मानिसहरु अटाउन सक्ने ६ हजार स्वायर फिटको एउटा सभाहल निर्माण भइरहेको छ । भविस्यमा आवश्यकता अनुसार थप संरचना पनि निर्माण गर्दै जाने तथा सभाहललाई पार्टियसन गरेर उपयोग गर्न सकिने गरि निर्माण कार्य थालिएको वाणिज्य सल्लाहाकार रिजालले जानकारी दिए ।
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले सभाहल निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर निर्माण कम्पनीलाई संघले सम्पूर्ण निर्माण सामाग्री भने आँफै उपलब्ध गराउने सहमतिमा काम भइरहेको छ । आफुरुले विभिन्न उद्योग,उद्योगी र व्यापारी वाट सहयोग माग्दै सभाहल निर्माण थालेको हुँदा त्यस्तो सहमति गरिएको संघका पूर्व अध्यक्ष रिजालले बताए ।
व्यापारिक महोत्वमा नगद र जिन्सि गरि झन्डै ३ करोड बराबरको प्रतिवद्धता आएको भएपनि त्यसमध्य अधिकाँस रकम उठ्न बाँकी नै रहेको निर्माण समितिका संयोजक रिजालले बताए । यसअघि तुलसीपुर अस्पताल स्थापना गर्नको लागि यहाँ महायज्ञ लगाइएको थियो ।
सरकारले तुलसीपुरमा सभाहल निर्माण गर्ने सवालमा कुनै चासो नदिएको हुँदा निजी क्षेत्र सभाहल निर्माणमा जुटेको रिजालले बताए । घोराहीको पुरानो वसपार्कमा भने सरकार आँफैले २७ करोडको लागतमा बहुउदेश्य सभाहल निर्माण गरिरहेको छ । त्यो जग्गा भने नगर विकास हो भने तुलसीपुरको जग्गा भने उद्योग वाणिज्य संघको स्वामित्वमा छ ।